Home Wararka Farah Macalin oo kamid ahaa taageerayaasha Farmaajo oo hawada ka baxay! Maxa...
Farah Macalin oo kamid ahaa taageerayaasha Farmaajo oo hawada ka baxay! Maxa isbadalay?
Farax Macalin oo ahaam jiray gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, kana mid ahaa taageerayaasha sida xooga leh u taageera Farmaajo, ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday in uu sii wado qoraladii iyo wararkii uu uga hadli jiray arimaha Soomaaliya, gaar ahaan taageerida Farmaajo.
Farmaajo ayaa horay u shaqaaleeyay qaar kamida caruurta Farax Macalin, kuwaas oo ka shaqayn jiray xafiiska Farmaajo. Waxa kale oo jira in uu lacag joogta ah lagu siin jiray taageerida uu Farmaajo ka taageeri jiray baraha Bulshada.
Inkastaa oo ayan wali jiray xog rasmi ah oo ku saabsan aamusnaanta Faraxa Macalin , hadana waxa jira warar sheegaya in dowlada Kenya uga digtay in uu sii wado dagaalka ka dhanka ah Kenya ee uu ku taageerayo Farmaajo. Wararka qaar ayaa sheegaya in Farmaajo ka goostay lacagtii uu sida joogta ah uga qadan jiray Xafiiska Farmaajo, ka dib markii dhaqaale dari la soo daristay Faramaajo.
Si kastaaba ha ahaatee Faraxa Macalin ayaa ahaa shaqsi aan ka xishoonin in uu taageero cidkastaa oo uu dhaqaale ka heli karo isaga oo iska dhigayo in uu yahay shaqsi u danaynaya ama ka naxaya dhibataada haysata dadka Soomaalida ah.